KATHMANDUTemperature 20.12°CAir Quality53
निजीकरण भनेको उत्पादन तथा वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता फराकिलो पार्नु हो ।
नेपालमा निजीकरणका बारेमा गरिने एउटा प्रमुख टिप्पणी हो– कौडीका भाउमा संस्थानहरू बेचिए ! पछिल्लो चुनावमा पनि यो विषय प्रखर रूपमा उठ्यो । हालै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रमा निजीकरणलाई ‘अध्ययन र आवश्यकतामा आधारित नभएर लहडमा गरिएको’ भनिएको छ ।
प्रतिपक्षले कांग्रेसको खेदो खन्नुपर्दा वा सरकारमा रहँदा कांग्रेसले गरेका नराम्रा कामको फेहरिस्त बनाउनुपर्दा निजीकरण पहिलो क्रमतिरै आउँछ । कतिपय कांग्रेस नेतासमेत निजीकरणलाई दलको आधार नीति–समाजवादी व्यवस्थाको बर्खिलाप गरिएको काम मान्छन् । बेलाबेलाको चुनावमा पत्तासाफ हुँदा निजीकरण र आर्थिक उदारीकरण नै कांग्रेस स्खलनको प्रमुख कारण हो भन्ने कांग्रेसजनहरूको आवाज बुलन्द हुन्छ, ‘अन्धाधुन्ध’ निजीकरण गरेर पार्टीको साख गिराएको भनेर । रामशरण महत र महेश आचार्यमाथि पटक–पटक औँला ठड्याइएको छ । कांग्रेसभित्र यो विषय चुनावमा हारेका बेला प्रखर रूपमा उठे पनि बहुमत ल्याएका बेला भने कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनैलाई दिएको छ, जसमाथि निजीकरणको दोष थोपरिएको छ ।
सामान्य बुझाइ के हो भने नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार सरकारी स्वामित्वमा छ । अर्थात्, निजीकरण भएको छैन । नेपाल आयल निगमले बिक्री गर्ने आधा दर्जन पदार्थमध्ये दुइटाको दृष्टान्त हेरौँ । काठमाडौँमा पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्य १ सय ५ रुपियाँ प्रतिलिटर हुँदा भन्सार बिन्दुमा घोषणा गरिएको मूल्य ५५ रुपियाँ ३९ पैसा थियो । भन्सार बिन्दुबाट उपभोक्ताको सवारीसाधनसम्म पेट्रोल आइपुग्दा ४९ रुपियाँ ६१ पैसाले मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालुएडिसन) भएछ । यो ४९ रुपियाँ ६१ पैसामध्ये ३७ रुपियाँ ८५ पैसा करबापतको रकम हो । बाँकी रकममध्ये ४ रुपियाँ ४१ पैसा नेपाल आयल निगमको हातमा र ७ रुपियाँ ३१ पैसा निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेका ट्यांकर व्यवसाय र पेट्रोलियम डिलरको हातमा पर्छ । निगमले करको रकम कारोबार गरोस् वा निजी क्षेत्रले कारोबार गरोस्, समान नै हो । त्यसलाई अलग्याएर हेर्ने हो भने पेट्रोलको मूल्य–शृंखलामा सिर्जना हुने आम्दानीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ६२. ३ प्रतिशत पर्छ । एलपी ग्यासमा उपभोक्ता मूल्य १ हजार ३ सय ७५ रुपियाँ प्रतिसिलिन्डर हुँदा, कर तिरेपछि हुने मूल्य अभिवृद्धि २ सय १६ रुपियाँ ८७ पैसा हो । जबकि, यसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा २ सय ६९ रुपियाँ ७९ पैसा छ भने आयल निगमको हातमा ५२ रुपियाँ ९२ पैसा घाटा ।